Sihlalutya i-Huawei Mate 20 Pro, ikhamera kunye nokuzimela ngeflegi | I-Androidsis
El I-Huawei Mate 20 Pro Iyaqhubeka ukugxila kwinxalenye enkulu yamehlo abasebenzisi bayo kwiintsuku ezimbalwa emva kokumiliselwa kwayo, kwaye inyani kukuba kwesi sigxina inkampani yaseTshayina icebise ukudibanisa isixhobo esinye zonke ezo mpawu zinokufunwa kwisiphelo sesona Isiphelo esiphakamileyo. Ukuba awubonanga eyethu Iimpawu zokuqala ungapasa ngale linki ukujonga.
Njengoko besithembisile, sele silapha uhlalutyo olunzulu lweHuawei Mate 20 Pro, isiphelo sendlela esishiye iimvakalelo ezilungileyo kwaye zimiselwe ngokucacileyo ukuba zezona zintle ze2018 kwaye mhlawumbi ziyinxalenye ye2019. Hlala nathi kwaye ufumane amanqaku kunye nokusebenza kwale Huawei Mate 20 Pro kuphononongo lwethu.
Njengokuba kuhlala kusenzeka, siza kuthatha ukhenketho olufutshane kuzo zonke iimpawu ezenza ukuba zikhetheke, kunye noluvo lwethu olunyanisekileyo malunga nokusebenza okunikezelwa ngumsebenzisi osemgangathweni mihla le. Iliso elibukhali le-Androidsis ngeli xesha lihamba ngaphezulu kweHuawei Mate 20 Pro, isixhobo esiza kuthi silindele kakhuluNgaba uya kuba nakho ukusinika yonke into esiyilindeleyo kuye? Nika ingqalelo yonke into esiyithethayo malunga nesi sigxina esimnandi. Nangona kunjalo, I-Huawei Mate 20 - 6.53 i-Smartphone kunye nePack Pack.
1 Uyilo kunye nezixhobo: IHuawei ibeka yonke into kwinkonzo yoluhlu lweMate
2 I-Hardware: I-Mate 20 Pro ayisebenzi, incinci kuyo yonke into
3 Bonisa: "Inotshi" encinci engasithelisi iphaneli ye-AMOLED
4 Iikhamera: Phantse ngaphandle kwamathandabuzo eyona ilungileyo kwintengiso
5 Ukuzimela kunye nesoftware: Xa kubonakala kungenakwenzeka, uHuawei wakwenza oko
6 Uluvo lomhleli: Ngokuqinisekileyo yeyona Android intle ye2018
Uyilo kunye nezixhobo: IHuawei ibeka yonke into kwinkonzo yoluhlu lweMate
Sizifumana sivelisa izinto ngaphambi kokuba singaphinde sizihlole. Ngaphandle kwamathandabuzo into yokuqala etsala umdla wethu kulungiselelo lweekhamera, kodwa siya kunikezela icandelo elibanzi ngakumbi kuloo kwimigca elandelayo. Ngaphambili, ukugoba kumacala omabini ngokukhawuleza kutsalela ingqalelo yethu, into de kube ngoku kuphela yinkampani yase-Korea yase-Samsung eyayineendawo eziphezulu kwaye ngokuqinisekileyo ifanele le Huwei Mate 20 Pro kakuhle. Amaqhosha evolumu kunye namandla anombala omangalisayo iqhosha, ngasekhohlo sishiywe uyilo olugudileyo. Kukwenzeka okufanayo nakwinxalenye ephezulu apho sine-infrared sensor kuphela. Into iyatshintsha ezantsi, sinonxibelelwano lwe-USB-C kunye netreyi yekhadi, kwaye musa ukukhangela imingxunya yesithethi, U-Huawei ufune ukwenza into entsha ngokwenza le port-USB-C isithethi, into eluncedo enomdla, engazange ibonwe ngaphambili kwaye isishiye incasa emnandi kakhulu emilonyeni yethu.
Imilinganiselo: 157,8 x 72,3 x 8,6
Ubunzima: 190 iigrem.
Ngaphandle kwamathandabuzo i-aluminium yayo, iglasi ibuya umva (kulula kakhulu ukuba ingcoliswe kuhlelo ngaphandle kwengubo encinci) kunye nokujikeleza kwescreen Senze sizive kumzuzu wokuqala ukuba sijamelene nesiphelo sepremiyamu. Iziva ilunge kakhulu esandleni, ikhululekile kwaye ubunzima bumiselwe ngokulinganayo.
I-Hardware: I-Mate 20 Pro ayisebenzi, incinci kuyo yonke into
Isikrini I-6.39-intshi ye-OLED enesisombululo se-QHD + kunye ne-19.5: 9 ratio kunye ne-538 PPI
Inkqubo I-Huawei Kirin 980 (ii-8 cores (2x Cortex-A76 kwi-2.6 GHz + 2x Cortex-A76 kwi-1.9 GHz + 4x Cortex A55 kwi-1.8 GHz))
i-ram I-6 GB / 8 GB
Ikhamera esemva I-40 + 20 + 8 MP eneeferches f / 1.8 f / 2.2 kunye f / 2.4 Flash ye-LED kunye ne-4K / 30FPS okanye i-1080p / 120FPS yokurekhoda nge-Zoom x3
Conectividad I-A-GPS kunye ne-GPS ye-Bluetooth 5.0 ye-USB Type-C Wifi 802.11 ac kunye ne-LTE Cat 21 eneDual NanoSIM (ukuxhomekeka kwintengiso)
Khu seleko Iscreen somfundi weminwe kunye nesikena sobuso se3D
Ukukhuselwa Inqanaba le-IP68 kunye nokhuseleko lokulwa nokuqhekeka
Uhlalutyo lwethu sivavanye imodeli ye-6 GB ye-RAM ebonelela ngamanqaku kwi Antutu Amanqaku angama-270.728, abetha iXiaomi Mi 8 okanye i-Samsung Galaxy S9 +.
Bonisa: "Inotshi" encinci engasithelisi iphaneli ye-AMOLED
Sifumana kule Huawei Mate 20 Pro a Iphaneli ye-6,3-intshi ene-1.440 x 3.210 resolution, Yintoni eya kusinika izigqibo QHD + ukuba siya kuba nakho ukumisela ukuthanda kwethu ngokusekwe kwiimfuno zethu, into esinokubulela ngayo kwaye ngokungathandabuzekiyo ikhuthaza ukuzimela kakhulu. Esi sisombululo sithetha ukutsiba kwesisombululo esincinci ngokubhekisele kwiHuawei P20 Pro umzekelo. Yiyo loo nto sifumana awona manqanaba aphezulu obukhali kwimarike, kwaye ngokuqinisekileyo ingaphezulu kokwaneleyo ekusebenziseni isixhobo esinezi mpawu. Ixhasa ukusetyenziswa kwemultimedia ngokuba inguqulelo yakho ebanzi engama-19,5: 9, enye eyongeza kwimilinganiselo engaqhelekanga. Nangona kunjalo, i-EMUI isebenzisa inkqubo yokusombulula okrelekrele eyahluka ngokokusetyenziswa ukwandisa ubomi bebhetri.
Sibe namava amnandi ngokukodwa ngaphandle, ngaphandle kokubuza nayiphi na ingxaki yokujonga isikrini kwiimeko eziqaqambileyo ngaphaya kwembonakalo ethi phantse nayiphi na iphaneli ye-AMOLED. Kwaye yinkampani yaseTshayina ejoyina ukusetyenziswa kweephaneli ezibonelela ngokusebenza okungcono ngokuchaseneyo, isisombululo kunye nokuzimela. Kufuneka iqatshelwe ukuba i-EMUI inika ithuba lokufihla kwinotshi ngokucima iipikseli ezijikeleze yona, ngaloo ndlela yanelise abagxeki bayo. Sinamafutshane ipesenti yescreen esisetyenzisiweyo sama-86,9%, engalunganga kwaphela, nangona idlula ngumntakwabo omncinci i-Huawei Mate 20.
Iikhamera: Phantse ngaphandle kwamathandabuzo eyona ilungileyo kwintengiso
U-Huawei ufune ukwenza ngokutsha kwakhona kwicandelo lokufota kwaye kubonakala ngathi uphumelele. Iphehlelele iHuawei Mate 20 Pro ngolungiselelo lweekhamera ngokuchasene nezinto ezikhoyo ezinikezelwa ngabanye abavelisi, kwaye kwakamsinya nje ukuba sithathe imifanekiso embalwa siyaqonda ukuba iyenzile ngokwenyani, nangona isoftware isenayo kuninzi ongakuthetha ngayo. Sineenzwa ezintathu, enye ine-40 MP nge-f / 2.8, enye nge-20 MP nge-f / 2.2 enye nge-8MP nge-f / 2.4, ukuba kunye basebenza ngokungaqhelekanga. Into yokuqala etsala umdla wethu kukuba siye saya kwiklasi ye-Zoom x2 enje ngee-terminals ezininzi ezinokhuphiswano, ukonwabela ukusondeza x3 kunye nezinye zoom zoom x5, konke enkosi ngokudityaniswa kwelensi yefowuni kunye ne-engile ebanzi lens kunye nebala iseti yayo yeekhamera.
Indibaniselwano yesandla sayo se-HDR kunye nobukrelekrele bokuzenzela kunye nenani elikhulu leendlela zokudubula kunye nenkxaso yesoftware enesicelo sekhamera yeHuawei kwaye onokubona ngokweenkcukacha kuhlalutyo lwethu lwevidiyo inika amava amnandi kakhulu. I-HDR isinceda ekuphuculeni uluhlu lwemibala eliyithathileyo, isusa ukukhanya okugqithileyo, into esele ixhaphakile kwezinye iiterminal. Inyani yile Imowudi yobugcisa bobugcisa ayibonisanga ukuba singcono kakhulu Ngokubanzi, izandla ezilungileyo xa uthatha umfanekiso, ngokunyanisekileyo, unqunyelwe ekuqaqambiseni imibala kuxhomekeke kuhlobo lokubanjwa esikuthathayo kunye nenani lokukhanya elikufumanayo, mhlawumbi kukhethwa ukukhetha ukubanjwa kwendalo ngakumbi. Sikushiya igalari yeefoto ngaphandle kokuhlela ukuze uziqonde ngokwakho.
Ngelixa kwinqanaba lokurekhoda sifumana ithuba lokufumana i-4K / 30FPS okanye i-1080p / 120FPS izigqibo ngoZoom x3 ngozinzo olulungileyo njengoko ubona kuhlalutyo lwevidiyo. Kwinqanaba levidiyo, le Projekthi yeHuawei Mate 20 ayidanisi, kunokuba kungenjalo kungenjalo. Kwimihla yethu imihla ngemihla sifumene isiphumo esibi kwinqanaba lokubanjwa kwesandi, ngelixa ividiyo isenziwa kakhulu yisoftware, ethi ivelise kancinci «Ukulibaziseka» phakathi kwento esiyibonayo kwiscreen kunye noko sikubambayo, kodwa loo nto iyaxatyiswa kwakamsinya nje ukuba ujonge umxholo wokuqala. Siyakhumbula ukuba siya kuba nakho ukufumana iividiyo ezihamba kancinci ukuya kuthi ga kwi-960 FPS.
I-Selfie Portrait yangaphakathi
Indlela yasebusuku yangaphakathi
Macro ngaphandle kwe-HDR
Siya kwikhamera yangaphambili, apho iHuawei ikwavela khona kweminye imisinga kwaye ithathe isigqibo sokubandakanya inzwa enye kuphela, ikwaxhaswa bubukrelekrele bayo bokuzenzela. Isivamisi esingaphambili sikwasivumela ukuba sithathe imifanekiso kwimowudi yemizobo phantse kuzo zonke izinto esizifumanayo kwezinye izinzwa, nangona kunjalo, sifumanisa ukuba inengxaki efanayo nezinye iitheminali zaseAsia, isoftware eninzi kakhulu "kwimowudi yobuhle" nokuba kungasebenzi kusenza sibe nobuso obucoceke ngakumbi kunokuba sinabo. Nangona kunjalo, le khamera yangaphambili izakufuna "isakhono" esithe kratya kwinxalenye yomsebenzisi ukufumana iziphumo ezisemgangathweni, kubonakala ngathi kunqabile ukufumana isiphumo esifanelekileyo, kwaye oko kunokubangela ukuba uphelelwe lithemba ukuba uqhele ukwenziwa kweekhamera eziphambili.
Ukuzimela kunye nesoftware: Xa kubonakala kungenakwenzeka, uHuawei wakwenza oko
Le Mate 20 Pro ibandakanya ibhetri ye 4.200 mah Okumangalisayo kukuba akubuchaphazeli ubukhulu okanye ubunzima besixhobo, enyanisweni, ndikufumanisa kunzima ukukholelwa ukuba ngebebeke ibhetri apho ukuba bekungengenxa yokuba ukuzimela kwayo kuyamangalisa. Sikwazile ukufumana phakathi kwe-12 kunye neeyure ezili-16 zescreen ngokuxhomekeke ekusebenziseni esikunika kwisiphelo sendlela, Nangona inxenye yesityholo ikwiHuawei kunye nolawulo lwayo lwebhetri olukrelekrele ngenxa ye-EMUI 9.0. Kungenxa yoko le nto sifika ngokulula kusuku lwesibini lokusetyenziswa ngaphandle kokurhuqa intambo. Kodwa iHuawei ikhathalele ukuhlawulisa le Mate 20 Pro ayisiyongxaki. Yenzelwe yona Isixhobile ngetshaja ekhawulezayo ekwaziyo ukusinika phantse iintsuku ezimbini zokuzimela kunye nemizuzu engama-58 yokutshaja ... Kweli candelo ndinokuthi "chapeau" kuphela.
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo akusekho kude, ikwafumaneka kuguqulelo lwayo "olukhawulezayo" elibiza ngokupheleleyo ifowuni ngaphezulu nje kweeyure ezimbini ezinesiqingatha. Kodwa lumka, isimanga asipheleli apha. Inkqubo yohlengahlengiso ebandakanya i-EMUI kwibhetri iyasivumela silungelelanise inkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-reverseOko kukuthi, uya kuba nakho ukuhlawulisa nasiphi na isiphelo sendlela esihambelana nenkqubo ye-Qi ngokuyizisa kufutshane neHuawei Mate 20 Pro yakho, kuxoxwa nabahlobo ngexesha lekofu.
Nangona kunjalo, I-EMUI inokuqhayisa ngokulula, kodwa nakwimiba ethile ephela iphazamisa umsebenzi omangalisayo kwinqanaba lezixhobo. Oopopayi abakhange bacwebe ngokupheleleyo, kwaye kunokubonakala ngathi i-terminal inzima ukwenza izinto xa ingeyonyani. Kubuhlungu ukuphawula ukuba kunzima ngathi ukwahlula i-EMUI 9.0 kwiinguqulelo zayo zangaphambili, nangona usemninzi umsebenzi ongaphambili kwaye iHuawei ngokungathandabuzekiyo iyakwazi ukuphucula oko sele kufundisiwe, kuyacaca ukuba banokwenza ngcono, ubuncinci kwinqanaba lotshintsho kunye nokulula kweemenyu.
Uluvo lomhleli: Ngokuqinisekileyo yeyona Android intle ye2018
Isiphelo sendlela sisinike uvakalelo olulunge ngakumbi, ngakumbi sithathela ingqalelo ukusondela ngexesha kunye nembangi engaphaya kwesidima efana ne-iPhone XS Max okanye i-Samsung Galaxy Qaphela 9. Kucacile ukuba sizifumene phambi kwezona zilungileyo Amava kwinqanaba le-Hardware kwi-Android ukuza kuthi ga ngoku, siza kudumisa amanqaku ayo amahle kwaye sikubonise into esiyithandileyo kancinane ngale Huawei Mate 20 Pro.
Siqala njengesiqhelo ngokubi. Njengoko sele ufunde kulo lonke uhlalutyo, inqaku eliphoxise kakhulu malunga nesiphelo Maleko Huawei ulwenziwo. Ndacinga ukuba kolu hlelo lutsha bakhetha ukuvumela i-Android ukuba ikhanye ngakumbi, bafunde kwiimpazamo njengoko kwenzekile ngeSamsung. Nangona kunjalo, iHuawei iyaqhubeka nokuguqula utshintsho kunye namacandelo athile esiphelo angabonakali ngathi ahambelana, umzekelo kukuba inkqubo yokuhambisa isenzo iphantse ibe yinto engenakwenzeka ukuyisebenzisa, ngokuchaseneyo nokubheja kwezinye iifemu.
Siyithandile i-Hardware ngokubanzi kwisiphelo sendlela, kuyilo lwayo, ngezinto zokwakha kwaye ngokucacileyo iphela ngamandla anikezelwa ngokudityaniswa kwe-GPU kunye ne-CPU yayo. Kucacile ukuba i-terminal ayinazintambo zokutsala yonke into oyiphosayo. Kwenzeka into efanayo nakwikhamera, ibonelela ngamava anakho ukwenza into entsha kwimarike apho iinkampani zisokola nzima. Ngaphandle kwamathandabuzo, kwicandelo, ikhamera kunye nemultimedia, uHuawei wenze umsebenzi phantse weshumi.
IHuawei Mate 20 Pro-Ukuphonononga
Esi sigxina siza kunikwa Ukususela ngo-1.049 kubaboneleli abaphambili, ungayifumana ngale khonkco. Ungayithenga eSpain kwiinguqulelo zayo kwi mnyama, i-Emerald Green kunye naseBlue Midnight, ishiya inguqulelo yeTwilight yolu hlalutyo ukulungiselela ukukhutshwa okukhethekileyo okuzayo. Le nguqulo ye-6 GB ye-RAM esiyivavanyileyo iya kuba ne-128 GB yokugcina, kodwa unokuhlala uthenga i-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina okanye ukhethe ukwandiswa ngekhadi le-NM elixhasa ukuya kuthi ga kwi-256 GB ukugcinwa kwesantya esiphezulu kusalindele ukuthengiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Sihlalutya i-Huawei Mate 20 Pro, ikhamera kunye nokuzimela ngeflegi
Phosa iziphako ezinamandla ngokuzoba iimilo zejiyometri ngezimbo zomzimba kwiSwipe Magic